Iingcebiso zokuXhobisa ukuThengisa | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Februwari 15, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UJenn Lisak Golding
Ukutshintsha kwentengiso kunye nefaneli yokuthengisa inyanzelisa ukuba senze njani ishishini. Ngokukodwa, oku kubhekisa kwindlela ukuthengisa okusondela ngayo kumathemba amatsha kunye nokuvala isivumelwano. Ukuthengisa okusebenzayo kukusebenzisana kunye nentengiso ngelixa kuveliswa ingeniso. Ukuqinisekisa ukuba la malinge alungelelanisiwe kubalulekile kwimpumelelo yentengiso kunye nentengiso.
Njengomthengisi, ewe ndibona ukuba iinzame zentengiso zibalulekile. Kodwa ekupheleni kosuku (kuxhomekeke kwimeko), iqela lezentengiso liseza kuba nefuthe "elinamandla" kwithemba kuba kukho unxibelelwano oluthe ngqo nolobuqu (bakube beludlulisile urhwebo olusekwe kwimvume okanye Nxibelelana ngqo). Ukuba nesicwangciso esiliqili sendlela yokufikelela kumathemba ngokwembono yokuthengisa kuya kubaluleke ngakumbi kunakuqala. Ngelixa umjikelo wentengiso unokuba lide nje njengomjikelo wentengiso, indawo nganye yokuchukumisa inokuthi ichonge ukuba ukufuphi na ukuhlala phantsi unethemba okanye nokuba sele bethethile nawe ngonaphakade.
Ukuba ufuna ukuqinisekisa ukuba inyathelo elinye ukusondela kuloo ntlanganiso, nazi izibini iingcebiso zokuvumela ukuthengisa:
Yenza uvakalelo malunga nethemba lakho lobuntu kunye nesimbo sokufunda. Abantu bafunda kunye nokwetyisa umxholo ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokukodwa, zintathu iintlobo zokufunda: eziviwayo, ezibonwayo, kunye ne-kinesthetic.
Ukuba ithemba lakho libonakala ngathi lifunda "ukuva" into oyithethayo, qiniseka ukufaka iipodcast, amakhonkco ezentlalo, okanye iividiyo kwisindululo sakho. Ezi ziqulatho zomxholo eziya kuthi zihambelane nolu hlobo lwethemba.
Ukuba ithemba lakho libonakala liphendula ngakumbi ngegrafu, iitshathi, okanye imifanekiso, uya kuba nomfundi obonakalayo ezandleni zakho. Olu lolona hlobo lubalaseleyo lomfundi. Iindidi zemixholo emininzi zinomtsalane kulo mfundi-iividiyo, i-infographics, ii-ebook, amaphepha emhlophe, imifanekiso, njl.
Okokugqibela, kukho abafundi basekhaya, abafunda ngokwenza. Oku kunzima ngakumbi ukusingatha kumbono wentengiso yomxholo, kodwa inokwenziwa. Bafuna ukuba "njani" isikhokelo okanye umxholo obaxelela "njani" banokuphumelela. Iimpapasho ezimhlophe, iincwadi, iividiyo kunye neewebhu ezijolise kwindlela yokufezekisa into zilungile kolu hlobo lwethemba. Ukubonisa ubuchule kunye nokubonelela olo lwazi kubo kubalulekile.
Zilumkele zonke iindlela ezinokubakho. Ngokubanzi, akukho namnye owenza izigqibo kwinkampani. Ukuthatha isigqibo sokutyala imali kwinkonzo okanye kwimveliso sisigqibo seqela. Ngelixa kukho abantu abathile abanezwi kunabanye, kubalulekile ukubhena kumaqela amaninzi ngaphakathi kwenkqubo yokwenza izigqibo.
Ngubani imveliso yakho okanye inkonzo eza kuxhamla? Oku kubandakanya ukuthengisa, ukuthengisa, ukusebenza kunye nokwenza (umgca osezantsi). Ngaba uyichonge indlela imveliso / inkonzo yakho ezinceda ngayo nganye yezi personas?
Sibona ukonyuka kombuzo wokubizela isenzo. Endaweni yokuxelela ithemba lokwenza into, iinkampani zibuza imibuzo ukukhuthaza ukucofa kwiindawo zabo. Abantu bathatha izigqibo ngokusekwe kweyona nto ibalungeleyo-umxholo ojikeleze "ii-personas" ziya kunceda ukucenga isigqibo seqela.
yethu Umxhasi wesiphakamiso sentengiso, I-TinderBox, ibonelela ngethuba lokwenza izindululo ezisisityebi zemithombo yeendaba eziza kubhenela kulo lonke uhlobo lomfundi, kwaye wazi ukuba ngubani na ojonga isicelo sakho. Ezi mitrikhi ziya kuthi ekugqibeleni zincede ukuvala isivumelwano kunye nokuphuhlisa ukuprofetwa kwabathengi. Ulawulo lwesindululo sentengiso ngundoqo ekuphumeleleni kwintengiso yokuvumela. Ukufunda indlela yokwenza isindululo esisebenzayo sokuthengisa kuyonyusa ukuguqulwa kwaye ucofe ukugqitha.
Zeziphi ezinye iingcebiso zokuthengisa onazo? Yintoni enye oyibonayo kwishishini?
tags: uqhagamshelwanoUkuThengiswa kweMpahlaUkucingelaUkunika amandla ukuthengisaiingcebiso zokuvumela ukuthengisa